Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Java Java ~ Journey-Assist - tahan'ny indonezianina Rupiah androany
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Java » Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Java
Java. Fifanakalozana fifanakalozana
Satria Java dia tafiditra ao Indonezia, ny sandam-pirenena eto dia ny rupee Indoneziana. Aseho amin'ny alàlan'ny fanafohezana latina IDR latina, ary amin'ny tsenan'ny vidiny any amin'ny fivarotana Java dia mazàna ny anaran'ny litera Rp. Amin'ny resaka kolokolozy, matetika ny mponina eo an-toerana dia miantso vola hoe "perak" - izany hoe "volafotsy".
Vola any amin'ny java
Inona ny vola tokony ho any Java
Mpivarotra any Java
Banky Banky any Java
Aiza no hanovana vola any Java
ATM ao Java
Vola any Java. Indonezia
Sintan'ny Java. Indonezia
Ankehitriny, ny fanamelohana an'ireo 1, 000, 2, 000, 5, 000 ary 10 rupees Indoneziana dia mivezivezy any Java sy manerana an'i Indonezia. Amin'ny fomba ofisialy, ny 000 Rupee dia mitovy amin'ny senatera 20, saingy tsy mbola navoaka ilay akama ary efa ela no nateraka noho ny fisondrotam-piainana. Na izany aza, ny vola madinika any Java dia hita ao am-piasana ihany koa ary manana rihana 000, 50, 000 ary 100 000 rupe.
Fivarotana sy fifanakalozana fifanakalozana any Java
Any amin'ny toerana fizahan-tany dia azo atao ihany ny manisa ny volan'i Indonezia sy ny dolara amerikana, fa ny tahan'ny any amin'ity farany ity dia tsy mahasoa firy. Ny safidy tsara indrindra dia ny mitondra dolara miaraka aminao, ary avy eo any Java dia manakalo azy ireo amin'ny rupees.
Fandoavam-bola amin'ny carte de crédit any Java
Ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny iray saika trano fandraisam-bahiny any Java dia azo atao ny mandoa amin'ny alàlan'ny carte de crédit na vola, ka tsy tokony hovana avy hatrany ny vola be. Rehefa kajy ny hotely iray misy karatra dia esorina ny vaomiera iray ao amin'ny banky, izay eo ho eo amin'ny 3-5 isan-jaton'ny vola.
Ny vola dolara dia natolotry tsara ho atakalo ho an'ny rupee eo an-toerana, satria rehefa manao kajy dolara dia mihena ny vidin'ny vidiny tsy mahomby. Ny fifanakalozana dia azo atao amin'ny mpivarotra ofisialy na havanana eny an-dalana izay misy mpanakalo vola, fa amin'ity tranga farany ity dia misy risika amin'ny fanaovana hosoka. Matetika indrindra dia misy fitaka rehefa mivarotra eny an-dalambe amin'ireo faritra mpizahatany any Java
Alohan'ny handehanananao any Java, ny fananana vola miaraka aminao hanakalo azy ireo any amin'ny nosy dia tokony ho fantatrao ny fihenan'ny sasany. Ny voalohany dia na dia tsara vintana aza ianao amin'ny mahita mpivarotra ekena izay ekena ny vola Rosiana, dia azo antoka fa misy ny kannibaliste. Noho izany, afaka mitondra dolara na euro fotsiny ianao.
Fitaovana hafa - amin'ny fifanakalozana maro, ny volavolan-dalàna isan-karazany dia soloina amin'ny vidiny hafa. Indrindra indrindra amin'ny ampahany lehibe amin'ny fifanakalozana amin'ny banky 1 miaraka amin'ny sandan'ny $ 100 dolara dia homena vola Indoneziana kely kokoa noho ny 10 volafotsy amin'ny sandry 10 dolara.
Ny fifanakalozana dia tokony hotanterahina fotsiny amin'ny fifanakalozana fifanakalozana ofisialy. Ahoana ny fomba fanavahana ny manampahefana iray tsy ho mpizara tsy ofisialy? Voalohany, hita ao amin'ny efitrano misaraka foana ny teboka ofisialy. Faharoa, ao amin'ny exchanger ofisialy dia takiana ny hameno ilay endrika, ary manondro azy ireo ny anarany feno, ny vola hovana sy ny karazana vola. Fahatelo, ny singa ofisialy dia ahitana marika mena-mena misy ny soratra hoe "fifanakalozana fifanakalozana ara-dalàna". Fa amin'ireo mpivarotra tsy manana ny soratra hoe "tsy misy fandefasana" dia maka vaomiera azo tsapain-tanana mandritra ny fifanakalozana izy ireo ary mitondra ny fifanakalozana any amin'ny habetsaky tsy mahomby. Ankoatr'izay, raha amin'ny fifanakalozana amin'ny fifanakalozana sasany dia mahasoa kokoa noho ny teboka hafa akaiky, dia azo antenaina ihany koa ny fangalarana.
Avy amin'ny traikefa manokana, tsara ny banky any amin'ny banky Java. Any amin'ny faritra mpizahatany dia maro ny banky tsy manova vola, fa raha mikasa ny hipetraka amin'ny toerana iray ianao amin'ny toerana iray, dia manoro hevitra izahay fa hahita sampana banky eo akaikinao izay ovaanan'ny vola.
Karatra plastika any Java. ATM
Raha toa ka mikasa ny handeha any Java ianao miaraka amin'ny karatry ny banky, tokony ho fantatrao ihany koa ny sasany. Misy habetsaka ao amin'ny toerana fizahan-tany eto amin'ity nosy ity. Na inona na inona ianao manana karatra dolara, tsy misy afa-tsy Rupees Indonezia ihany koa ireo ATM eto. Ny sasany amin'ireo ATM dia misy anaram-boninahitra 100 000 rupees, 50 000 hafa. Tokony homena karatra mifatotra amina kaonty amin'ny vola sandoka mora vidy (dolara amerikana na euro). Araka izany, azo atao ny mampihena ny vaomiera amin'ny famatsiam-bola, izay ambany indrindra 3 isan-jato.
Ny sandany azo esorina amin'ny karatra iray amin'ny ATM iray amin'ny fotoana iray dia avo indrindra ny Rs 3 any Indonezia (000 000 eo ho eo). Na izany aza, matetika na dia ambany kokoa aza izany. Fanampin'izay, saika ny ATM rehetra dia nilaza mazava tsara izay anton-tsoratra ao anaty azy. Ary miankina amin'ny lanjan'ny tarehy ny habetsaky ny farany. Noho izany, raha 200 50 ny volavolan-dalàna, ny ATM dia afaka mamoaka hatramin'ny 000 1 000 na hatramin'ny 000 1 200.
I Indonesia dia heverin'ny banky eran'izao tontolo izao ho firenena izay tsy atahorana ho lany vola. Noho izany, aza adino ny mampitandrina ny bankinao fa mikasa ny hampiasa ny banky banko ao Indonezia ianao. Raha tsy izany, aorian'ny fampiasana voalohany karatra plastika dia mety ho voasakana!
Ny banky any Java dia tsy manandrana maneso na iza na iza, ary ny taratasim-bola iray dia averina arahana, izay tsy maintsy tazonina mandra-piverina any Indonezia. Tsy misy komisiona napetraka na ny habe dia asiana eo akaikin'ny taham-fifanakalozana. Matetika dia karazana karazan-javatra kely voafetra (amin'ny ankapobeny - 200 rupees), tsy miankina amin'ny vola nindramina. Ny ora fandefasana banky dia hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 15.
Tsy misy ny olana amin'ireo mpanafatra ofisialy, fa amin'ny birao vola tsy ofisialy mora foana voafitaka. Raha ny zava-misy manokana dia afaka mandray vaomiera mpirotsaka ao izy ireo - hatramin'ny 30 isan-jaton'ny haben'ny fifanakalozana, na manandrana manararaotra ny volan'ny Indoneziana tsy mitovy amin'ny endrika ivelany (indrindra amin'ny anaram-boninahitra ny 10 sy 000 rupe) ary tsy dia zatra ny mpizaha tany efa za-draharaha .
Raha manapa-kevitra ny hanakalo vola amin'ny arabe ianao ary handresy lahatra ilay mpampivarotra vola, nefa tsy te hamerina ny volanao izy, dia mitombina ny mandrahona ny hiantsoana ny polisy mpizahatany (Telefaonina azo ampiasaina any Indonezia)
Memo to fizahan-tany any Java
Ny sandan'ny Java dia Rupiah indonezianina (IDR)
Ireo fitaovana finday any Indonezia
Java Time (GMT + 8)